macOS Catalina 10.15.4 beta 2 inosanganisira karaoke muApple Music | Ndinobva mac
Tony Cortes | | Apple Music, MacOS Catalina
Kana Chirungu chako chisina kunyatsonaka, zvinokwanisika kuti kana ukateerera rwiyo mumutauro iwoyo pane mazwi anokutiza, uye nekudaro iwe hauzive kuti ndeapi mazwi uye haugone kuaimba. Apple iri kuzokubatsira iwe uye mubeta nyowani yakavhurwa zuro reMacOS Catalina, inosanganisa ruzivo.
Sezvinoitwa Apple Music pane iPhone, ikozvino chishandiso ichi chinokuratidza iwo mazwi enziyo munguva chaiyo, yakawiriraniswa nemumhanzi, sekunge yaive karaoke. Pakupedzisira tinogona kuimba nziyo dzatinofarira nekuverenga mazwi pakombuta yedu. Kutanga pamberi peMac yedu, uyezve kana tangodzidza iwo mazwi, mushawa ... kana chero kwaunoda.
Yechipiri beta vhezheni ye macOS Catalina 10.15.4 yakaburitswa nezuro, uye iyi nyowani nyowani inounza rutsigiro rwemazvirokwazvo-nguva synced mazwi muApple Music app. Ichi chishandiso cheMac chakutokuratidza mazwi enziyo, asi haana kufamba munguva chaiyo kune kurira kwemumhanzi, chinova chinhu chave chiripo paIOS kubvira pakatanga iOS 13. Zvino zvinoita sekunge inosanganiswa muMacs.
Parizvino hadzisi dzese nziyo dzine mazwi akafananidzwa nenguva, asi anowanikwa kumazita anozivikanwa uye anonyanya kutetererwa kune nziyo. Nziyo dzine mazwi anoenderana dzinozove neinoratidzira iyo inodhindisa iwo mazwi sezvavanenge vachiimbwa.
Pakatangwa mazwi enguva chaiyo yeiyo iOS 13 munaGunyana 2019, Apple Music maneja Oliver Schusser akataura mubvunzurudzo kuti Apple ine timu yevashandi vanoteerera nziyo uye vanonyora mazwi kuti vaone kuti dzakarurama uye dzakabatana nemumhanzi., panzvimbo pekupinza mazwi kubva kune wekunze mupi. Parizvino, ivo chete vagadziri vanogamuchira iyo betas vanogona kunakidzwa nehuhu hutsva. Mumazuva mashoma vhezheni yekupedzisira ichaburitswa kune vese vashandisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » MacOS Catalina » macOS Catalina 10.15.4 beta 2 inowedzera karaoke kuApple Music
2 matsva Apple Stores anovhura madhoo avo kuChina, zvichiita huwandu hwese gumi nemanomwe